Noho ny Covid-19 : misy manararaotra mandripaka ala | NewsMada
Noho ny Covid-19 : misy manararaotra mandripaka ala
Namoahana tatitra ny faritra arovana ambonin’ny tany eto Madagasikara, amin’izao vanim-potoana mampihanaka ny Covid-19. Mibaribary ny fa­havoazana : mihombo ha­trany ny fahapotehan’ny ny ala amin’ireny faritra arovana ireny.
Nanomboka volana marsa hatramin’ny mey 2020, na­taon’ ireo mpikambana sy mpiara-miombon’antoka mpitantana ny fanadihadiana any amin’ ireny faritra arovana ireny. Nitombo betsaka ny afo tafiditra amina faritra arovana 29 raha oharina tamin’ny taon-dasa, 6 amin’ireo no tena nahitana afo mivaivay : fanaovana saribao sy fanapotehana hazo.
Any amin’ny faritra arovana Bongolova, ohatra, 53 ny la­vaka fandorana saribao tamin’ ny 2019, tafakatra 123 amin’ izao fotoana izao, nitombo
100 % izany ny fahapotehan’ ny ala. “Sarotra ny manentana ny olona hanara-maso noho ny fiarovana amin’ny aretina ; mahazo vahana amin’izany ny fikapana ala, ny doro tanety, mitombo miaraka amin’izany koa ny halatr’omby sy ny voly”, hoy Razafisoa Ratalata, filo­han’ny Mihavao mitantana ny faritra arovana any Amoron’i Onilahy, Toliara. Nandritra ny volana mey sy avrily, 21 nahitana afo tao anatin’io ala io. Tamin’ny taon-dasa io, ny faritra kely velarana indrindra ny ala ripaka manerana ny Nosy : 32 ha.
Tohanan’ny WWF ny vondron’olona any Amoron’i Oni­lahy hanamafisana ny fana­raha-maso. Faritan’ny WWF daholo ny toerana fantatra fi­aingan’ny afo, ampitomboana ny peta-drindrina zaraina amin’ ireo mpitantana ny faritra sy ny mpanara-maso any anaty ala. Misy fandaharana amin’ ny radio any an-toerana hanamafisana ny ady atao amin’ny afo, araka ny toromarika omen’ ny teknisiana ao amin’ny WWF. Nitombo hatrany ny fahapotehan’ny ala any amin’ ireo faritra arovana, hatramin’ ny nisian’ity valanaretina Co­ronavirus ity. Na izany aza, tsy mihemotra fa vonona hana­ra-maso sy hiaro hatrany ireo mpitantana nanankinana izany.